အမေးအဖြေများ -, Ltd. CCIC စမ်းသပ်ခြင်း Co. ,
Fujian CCIC Testing Co. , Ltd ။
China Certification & Inspection (Group) Fujian Co. , Ltd.
ကွန်တိန်နာ Loading ကြီးကြပ်
စက်ရုံစာရင်းစစ် သင်တစ်ဦးပေးသွင်းနားလည်ကူညီပေးခြင်း ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရဲ့အပါအဝင် စွမ်းရည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။
ထုတ်လုပ်မှုအကြိုစစ်ဆေးခြင်း ထုတ်လုပ်မှုခင်မှာ ၊ အကူအညီနဲ့ ing သင်သေချာစေ ကုန်ကြမ်းများနှင့် components will meet your specifications and are available in quantities sufficient to meet the production schedule.
ထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးခြင်း (DPI) အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာထုတ်ကုန်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ငါတို့၏ကိုယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေ ကိုရှောင်ကြဉ် အချို့ ချွတ်ယွင်း ထင်ရှားကျော်ကြားသော, ဒါဟာအစသင်စစ်ဆေးကူညီပေးနိုင်ပါသည် ထုတ်ကုန်အချိန်ဇယား နှင့် ကိုက်ညီ သည့်အခါထုတ်ကုန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပို့အချိန် .
ကြိုတင်တင်ပို့စစ်ဆေးခြင်း (PSI) ၎င်းသည် အထိရောက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း that confirms the whole shipment's quality level. It normally requires the production to be 100% complete and at least 80% of goods to be packed into cartons The checked samples are randomly selected according to AQL standard.
Loading ကြီးကြပ်မှု ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ထား နိုင်ပြီးကျိုးပဲ့နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အခြေအနေကိုသင်လက်ခံရရှိသည်အထိအာမခံခြင်း။
မည်သည့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှု၊ မမှန်ကန်သည့်တင်ပို့မှုများ၊ စစ်ဆေးခြင်းသည် ၀ ယ်သူ၏အကျိုးခံစားခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ကွဲပြားခြားနားသောစစ်ဆေးရေးအချက်များရပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်မန်နေဂျာအကြားစစ်ဆေးခြင်းအမျိုးအစားကိုတစ် ဦး ချင်းအလိုက်လေ့လာမှုပြုပါမည်။
2. ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ / spec
4.Function / parameter သည်စမ်းသပ်
စစ်ဆေးမှုများမှတ်သားနေပါသည် / 5.Packaging
စစ်ဆေးမှု၏အားလုံးပါဝင်သောစံနှုန်းမှာထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင် မှလွဲ၍ တရုတ်ပြည်၏မြို့ကြီးများတွင်လူတစ် ဦး လျှင်တစ်နေ့လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၈ မှ ၂၈၈ ဖြစ်သည်။ ဤစံနှုန်းသည်တာ ၀ န်တစ်ခုစီအတွက် ၁၂ နာရီအလုပ်ချိန် (ခရီးသွားခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ခြင်းအပါအ ၀ င်) ကိုအကျုံးဝင်သည်။ စစ်ဆေးရေး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစရိတ်များအတွက်အပိုဆောင်းအပိုမရှိပါ။
သုံးစွဲသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုံစံကိုပေးပို့ပြီး 2-3 ရက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ စစ်ဆေးမှုအသေးစိတ်ကိုအတည်ပြုရန်စက်ရုံအားဆက်သွယ်ပါ။ ဖောက်သည်စစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုပြီးပေးချေပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းစစ်ဆေးမှုကိုစစ်ဆေးပါမည်။
Adress: ကြမ်းပြင် 20, အမှတ် 75, အရှေ့ Jiangbin ရိပ်သာလမ်း, Mawei ခရိုင်, ဖူ, ဖူ, တရုတ်